Dhibane in dhihiisa ku waayay weerarkii safaarada mareykanka e... | Universal Somali TV
Dhibane in dhihiisa ku waayay weerarkii safaarada mareykanka ee Nairobi oo si layaab leh uga hadlay
Iyadoo 20 sano ay ka soo wareegtay markii weerarkii mataanaha ahaa lagu qaaday safaaradaha mareykanka uu ku leeyahay magaalada nairobi iyo der al salaam oo tanzania ah ayaa waxaa wali dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay weerarkaas eheladooda ay qaarkood sheegeen in ay xasuustaan.
Maanta ayaa munaasabado balaaran lagu dhigay laba dal waxaana ka soo qeyb galay dadki ay eheladooda waxyeelada ka soo gaartay kuwii ka badbaaday iyo marti sharf kale.
Douglas Sidialo oo indhihiisa ku waayay weerarkii nairobi ayaa waxaa uu sheegay in uu dareemayo in xiligaas uu taagnaa meel qaldan.
Ninkaan ayaa intaa raaciyay markii uu indhaha beelay uu noqday ruux dhadhan aan laheyn oo uu ula jeeday in mid ka mid ah xubnihii ugu muhiimsanaa Jirkiisa uu waayay.
Balse waxaa uu sheegay in uu jeclaan lahaa in maanta uu noolaado ninkii falkaas ka danbeeyay si uu u dareemo xanuunka ay ku jiraan dadka xubnahoodii ku waayay weerarkaasi.
Douglas Sidialo oo ah afhayeenka ay dhibanayaasha kenya ayaa sheegay in ay hada yihiin ku dhiban balse aysan waligood dhibka ku jiri doonin.
Waxaa sidoo kale weerarkaas xaasaskooda ama ragooda ku waayay muwaadiniin u dhashay dalka kenya iyo wadanka mareykanka.
Xoghayaha arimaha dibeda mareykanka Mike Pompeo ayaa isna sheegay maanta war uu soo saaray in xiriirka dalalka Afrika uu la leeyahay mareykanka aysan waxba u dhimi doonin weerarada Argagixiso.
Weeraradii mataanaha ahaa ee lagu qaaday safaaradaha mareykanka ee Nairobi iyo Der el salaam 20 sano ka hor maanta oo kale ayaa waxaa ku dhintay 224 ruux halka 5,000 oo afrikaan ah badina ka soo jeeda kenya uu dhaawac ka soo gaaray.
Safiirka mareykanka u fadhiya magaalada Nairobi Mr Robert Godec oo ka hadlay munaasabadii ducada aheyd ee ka dhacday nairobi ayaa sheegay in uu aad uga xanuunsanyo weeraradaasi lagu waxyeeleyay dadka aan waxba galabsan.
Kan-xigaHaweeney diiday in ay naas nuujiso cu...
Kan-horeQaxootiga Afghanistan oo saameyn ay k...
Boko Xaraam oo loogu baaqay in 24 saac gudahood ay ku sii deyso dhaqaatiir u shaqeysa hey,ada ICRC
Wadamada France Uk iyo Jarmalka oo ku baaqay in la dadajiyo baadi goobka loogu Jiro wariyaha lagu la'yahay Turkiga
Jordan iyo suuriya oo ku dhawaaqay in la furi doono xaduuda labada dal
40,455,757 unique visits